​उपत्यकामा ट्राफिक जाम कहाँ–कहाँ हुन्छ ?
काठमाडौ, ११ माघ । उपत्यकाको ट्राफिक अस्तव्यस्त छ । एउटै चोकमा सवारीसाधनहरू घन्टौँ कुर्नुपर्ने अवस्था छ । काठमाडौं र भक्तपुर जोड्ने मुख्य नाका कोटेश्वर सबैभन्दा धेरै जाम हुने क्षेत्र हो । यो चोक भएर दैनिक कम्तीमा ५७ हजार सवारी गुड्छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा टेकराज थामीले समाचार लेखेका छन् । धेरै ट्राफिक जाम हुने क्षेत्र कोटेश्वरः काठमाडौं उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै ट्राफिक जाम कोटेश्वरमा हुने गरेको… विस्तृत समाचार
चितवनमा महिला भ्रूणहत्या बढ्दो
शान्ता अधिकारी/चितवन, १८ माघ । चितवनको पहाडी गाउँ काराकबाट एक महिला पेटमा छोरी भएका कारण सात महिनाको गर्भपतन गर्न आइन् । आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएकी उनको परिवारमा यसअघि पाँचवटी छोरी जन्मिसकेका थिए । छैटौँ सन्तान पनि छोरी भएको थाहा पाएपछि उनलाई श्रीमान्ले दैनिक यातना दिन थाले जसका कारण उनी गर्भमा भएकी छोरी फाल्न चाहन्थिन् । तर, भरतपुरमा रहेको एक निजी अस्पतालले गर्भपन गर्न दश… विस्तृत समाचार
​अस्तव्यस्त हेटौंडा अस्पताल
शिव चौलागाईं/मकवानपुुर, १८ माघ । हेटौंडा अस्पतालको स्तरोन्नति रोक्न स्वयं स्वास्थ्यराज्यमन्त्री नै लागिपरेका छन् । अस्पताललाई सुविधासम्पन्न बनाउन आइसियू सेवा सुचारु गर्न खोजिएकोमा स्वास्थ्यराज्यमन्त्री तारामान गुरुङ बाधक बनेका छन् । मन्त्री गुरुङकै दादागिरीका कारण सुचारु हुने अन्तिम तयारीमा पुगेको आइसियू सेवा रोकिएको छ । लामो समयदेखि ‘रिफर सेन्टर’ भनेर आलोचना खेपिरहेको अस्पताललाई सुधार गरी वर्तमान अवस्थामा ल्याउन अस्पताल विकास समितिका वर्तमान अध्यक्ष सुनिल मोक्तानले ठूलो… विस्तृत समाचार
कविता चौतारीमा उमेश र चन्द्र
काठमाडौं, १७ माघ । राजधानी होस् या मोफसल, देश होस् या परदेश कतै नै कतै एकल या युगल या त सामूहिक कविता वाचनका कार्यक्रम भई नै रहेका छन् । यसै क्रममा पछिल्लो पटक ‘मिलाप’ मासिक पत्रिकाले नियमित कविता वाचन शृंखलाको आरम्भ गरेको छ– युवा कविद्वय उमेश अकिञ्चन र चन्द्र रानाहँछालाई प्रस्तुत गरेर । ओझेलमा परेका स्रष्टालाई अवसर प्रदान गर्नुका साथै कविता विधाको समृद्धिमा सक्दो योगदान… विस्तृत समाचार
​देवयानी राणा राजनीतिमा
काठमाडौं, १७ माघ । राप्रपाका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपतिशमशेर राणाकी छोरी देवयानी राजनीतिमा सक्रिय हुने भएकी छन् । राप्रपाको दोलखा जिल्ला समितिअन्तर्गत शैलुंगेश्वर गाउँ इकाइ समितिले ६ माघमा देवयानीलाई जिल्ला अधिवेशनका लागि क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनाएको छ । बाबुले सिन्धुपाल्चोकलाई आधार मानेर राजनीति गरिरहेका वेला छोरी देवयानीले भने दोलखालाई आधार बनाउन लागेकी हुन् । गाउँ इकाइ समितिको भेलामा भने देवयानी शैलुंगेश्वर गइनन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर… विस्तृत समाचार
दीर्घायु अस्पतालद्वारा ‘गल्ती ढाकाछोपको प्रयास’
१४ माघ २०७३
काठमाडौं, १४ माघ । चाबहिलको मित्रपार्कस्थित दीर्घायु गुरु अस्पतालको लापरवाहीले इलामका एक बिरामीको मृत्यु भएको भन्दै उनका आफन्तले बिहीबार दिनभर धर्ना दिएका छन् । मृगौलाको पत्थरीको अप्रेसनपछि इलााम बाँझो–७ की ६३ वर्षीया सरिता राईको मंगलबार साँझ मृत्यु भएको थियो । चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भए पनि अस्पताल व्यवस्थापन गल्ती स्वीकार गर्न तयार नभएको मृतककी छोरी बिमला राईले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार बिहीबार साँझ प्रहरी… विस्तृत समाचार
​पूर्वराजपरिवारको जग्गा महोत्तरीमा फेला
काठमाडौँ, १३ माघ । पूर्वराजा वीरेन्द्र शाहको परिवारको १० कट्ठा जग्गा फेला परेको छ । पूर्वराजा वीरेन्द्र र उनका परिवारजनको नाममा रहेको सम्पत्ति हेर्ने नेपाल ट्रस्टले खोजबिन गर्दा महोत्तरीको जलेश्वरमा उक्त जग्गा फेला पारेको हो । ट्रस्टका सहसचिव लेखबहादुर कार्कीले पूर्वराजपरिवारको नाममा रहेको उक्त जग्गा कात्तिकमा फेला पारिएको भए पनि ट्रस्टको सञ्चालक समितिको बैठक बस्न नसक्दा ट्रस्टको नाममा ल्याउन नसकिएको बताए । भने, “चाँडै नै… विस्तृत समाचार
किन बढ्यो चितवनमा आत्महत्या ?
शान्ता अधिकारी, ११ माघ चितवन । भूसंरक्षण कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख कमलप्रसाद गौतम गत पुस १८ गते विभागीय कामको सिलसिलामा काठमाडौं हिँडेका थिए । दोस्रो दिनबाटै वेपत्ता भएका उनी नौ दिनपछि रामनगरबाट डेढ किलोमिटर टाढा जंगलमा झुन्डिएको अवस्थामा भेटिए । वन गोडमेल गर्न गएका स्थानीयवासीले झुन्डिएको शव देखेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । स्याङ्जाबाट हिडेपछि काठमाडौं नगई उनी एक रात मुग्लिनस्थित एउटा होटलमा बसेका थिए ।… विस्तृत समाचार
​हेटौंडा सडक विस्तारले तरंगित
शिव चौलागाईं/ मकवानपुुर, ११ माघ । एसियन हाइवेअन्तर्गत पर्ने मकवानपुुरको सदरमुकाम हेटौंडाको मुख्य सडक फराकिलो बनाउन २५ मिटर सडक सीमाभित्र परेका निजी घर भत्काउन थालिएपछि अहिले हेटौंडा तरंगित बनेको छ । सडक सीमाभित्र परेका सरकारी कार्यालय भत्काइसकेको डिभिजन सडक कार्यालयले निजी घरहरूमा पनि डोजर चलाउने तयारी गरेपछि बजार क्षेत्रमा दिनहुँ जस्तो तनाव उत्पन्न हुन थालेको छ । तत्काल १५ दिनका लागि निजी घर नभत्काउनु भन्ने… विस्तृत समाचार